သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ Customer Rating တက်လာစေဖို့ဆိုရင် -
SEO (Organic Listing)
SEM (Pay Per Click)
GDN & Remarketing
Email Blast (EDM)
Customer Rating ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် Product/Service တွေရဲ့ ရောင်းအားအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Review တွေနဲ့ Rating တွေဟာ Product/Service တစ်ခုခုကို သိချင်ပြီးဆိုရင် Customer အများစုအဓိက ထားပြီး ရှာဖွေကြည့်ရှုတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ Customer တွေဟာ သူတို့လိုတဲ့အရာကိုတော့ကောင်းတာလေးပဲလိုချင်လို့ပါ၊ အဲ့ဒီ Product/Service မှာ Negative Review တွေ Bad Review တွေများနေရင်တော့ ရွေးချယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Social Media ပေါ်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေပြီဆိုရင်တော့ Review တွေကပိုပြီးတော့တောင် အရေးကြီးပါတယ်။ Social Media မှာက မကောင်းတဲ့အရာဆိုပိုပြီး ပြန့်နှံ့တာမြန်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ Product/Service ကိုအားနည်းချက်နည်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းပေ့ါ။
Negative Review နည်းပြီး Amazing Review တွေများနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Product/Service တွေကို Boost လုပ်ပြီးသားတောင်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ခေတ်မှီတိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ Review တွေဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရေးပါလာရတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ယခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်နေသလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ လူတိုင်းနီးပါး Social Media Platform တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Twitter, Instagram… တွေကိုအသုံးပြုနေကြပြီ။ သင့်ရဲ့ Product/Serviceကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ကဝင်ကြည့်ပြီး ဝယ်ယူဖို့ အတွက်လေ့လာ ရှာဖွေပြီးဆိုရင် Review တွေကိုအရင်လေ့လာပြီးမှ ဝယ်မယ်မဝယ်ဘူးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆိုရင် Review ရေးရုံတင်မကပဲ Social Media တွေပေါ်ကိုပါ Sharing တွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိကျပါတယ်။
Customer Relation ပိိုခိုင်မာလာစေဖို့အတွက်ပြုလုပ်ပေးပါ။ သင့် Product/Service ကို Delivery စနစ်ပါ စနစ်တကျပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ Customer တွေကို စိတ်ချမ်းသာစေပြီး ကြီးမားတဲ့ Customer Experience Rating ကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Delivery စနစ်ကိုသာ သေချာပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် သင့် Product/Service ကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Customer ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ Sharing လုပ်ပေးမှာသေချာပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ သင့် Competitor ရဲ့ Product ဆိုရင် Customer Experience Rating ပိုများတဲ့သင့် လုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စနစ်တကျလေးလုပ်ကိုင်ပြီး၊ Positive Review တွေ အများကြီးနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို Customer Rating ကောင်းကောင်းနဲ့ ရပ်တည်လာနိုင်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Wednesday May 6th, 2020/ Blog/0Comment
Engagement Post တွေဖန်တီးရာမှာ အသုံးဝင်စေမယ့် Content Idea များ
2022 အတွက်အကောင်းဆုံး Logo Maker Site များ
2022 Top 10 Social Media Platforms များ
Business အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ SWOT Analysis
Liks Us on Facebook
: No. 82, 1st Floor, Lan Thit St, Lanmadaw Tsp, Yangon 11131, Myanmar.
: 01 230 3270 , 09 51 68152, 09 7839 13123
Copyright © SEOMyanmar 2022. All Rights Reserved